Oge Ọgụgụ: 10 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 14/05/2020)
Tupu anyị na-amalite, Ka anyị chọpụtagodị ihe kpọmkwem mere Europe na-kacha mma nwetara site na ụgbọ okporo ígwè njem- ka emechara, a Afrika e mmadụ bi ruo ọtụtụ puku afọ, nke pụtara ya akụrụngwa na-ukwuu mepụtara. Ọzọ ụdịdị nke njem bụ mfe dị, ma e nwere ihe ka ga-ekwu maka ebube ndọrọ nke ụgbọ okporo ígwè njem. Nke a bụ eziokwu karịsịa n'ihi na mbụ oge njem, who can take advantage of train schedules to hop on board just before it departs. Nke a bụ na miri iche Europe ọdụ ụgbọelu, ebe gị kacha nta mbata oge tupu ọpụpụ bụ dịkarịa ala awa abụọ, na ị na-eji oge ndị ọzọ na ego n'ụzọ ọdụ ebe.
N'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-enwe na uru nke a na-conveniently emi odude ka isi njem nleta ebe na-adọrọ mmasị, so it’s easy to step off your train and head directly to your destination.
dị ka e kwuru, niile Eurostar tiketi gụnyere ihe abụọ iberibe ibu na a aka akpa. Ọ bụrụ na ị na-eweta ọtụtụ nke akpa, ị nwekwara ike na-ahọrọ a elu klas tiketi na-enye ohere gị iji mee ka ndị ọzọ na akpa. Na ntule ndịiche, mmefu ego ụgbọ elu nwere ike ikwu na ihe mbụ ha ntinye akwụkwọ, ma bag ụgwọ na oche nhọrọ ebubo ngwa ngwa tinye.
Tiketi ahịa maka njem a na-agbanwe a ọtụtụ, n'ihi ya, anyị nwere ike ikwu ịzụ tiketi ka anya dị ka ị na-enwe ike. -ekwu, ndị a tiketi na-aga na-ere ọnwa atọ tupu, ezie na dabere na oge i nwere ike na-ahụ na ha ruo ọnwa isii tupu. Anyị na-akwado na iji website ịhụ na akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè, nke na-akpaghị aka na-enyocha ihe niile dị atọ ndị yiri nkata na ị na-price price omume, na-ekwe nkwa.
The Eurostar ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ atọ na klas cabins, dabere na gị ego. N'ihi na ndị na nanị na-achọ na site n'otu ebe gaa ebe ọzọ, abụọ na klas tiketi bụ gị mma nhọrọ. Ndị na-azụ ahịa njem nwere ike kama na-ahọrọ Standard Premier ma ọ bụ Business Premier tiketi, ma nke ekwe ka ị na-anọdụ ala na mbụ na klas na-azụ na-enye nri n'oge njem gị, yabụ ka anyị mụta ihe ntakịrị banyere London gaa tiketi ụgbọ oloko na Paris:
Dị ka anyị na-na na kwuru n'ihu, ịnye ọnụahịa dịgasị dị ka njem gị ụbọchị, ya mere na ị ga-achọ ka akwụkwọ ozugbo nnweta-emepe. If you book far enough in advance, ị ga-achọ na-akwụ banyere 55 Dollar otu ụzọ, ma ọ bụ 90 Dollar njem okirikiri. Ichere ruo mgbe ikpeazụ nkeji nwere ike ụgbọala ahịa igwe na-elu, na-akwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta na ibawanye gasịrị ị zụrụ gị tiketi. Nke a bụ eziokwu n'ihi na ma njem okirikiri na otu ụzọ na-tiketi.
Ọ bụ uru arịba ama na Eurostar bụghị dị ka ihe niile ndị na-jide a okporo ígwè ngafe, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka a na njem na-adọrọ na oké ọnụ, ịzụta ụgbọ oloko gị tiketi tupu. Ị nwere ike ịchọta ụgbọ oloko tiketi online na dị iche iche weebụsaịtị, ezie na ụgbọ okporo ígwè tiketi ahịa nwere ike inflated tụnyere Save A Train.
Dabere na gị ụgbọ klas, ị ga-chọrọ na-abata na gị ọpụpụ ebe ọ dịkarịa ala 40-60 nkeji tupu ụgbọ oloko ahụ pụọ na london gaa paris. Ọ bụrụ n’inwetara tiketi klaasị mbụ Premier League si na London gaa naParis, ị ga-enwe ohere na-ekewaghị ekewa ezumike. Ma ọ bụghị ya, na e nwere ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị ka ị na-peruse. Ụfọdụ n'ime anyị mmasị ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-agụnye:
AMT Coffee – A ụlọ ahịa kọfị na abụọ ebe n'ime ụgbọ. Ọ na-enye ejiri mee ọṅụṅụ na n'ụzọ zuru ezu compostable iko, nke na-eme gburugburu ebe obibi ọnụ ọchị.
Chop'd – A ike-okowụk restaurant, Chop'd awade a dịgasị iche iche nke ofe, salads, stews na eyiri niile ụdị njem.
ozugbo onboard, ngụkọta njem oge si London na Paris bụ mkpokọta 2 awa na 16 nkeji. Jikọtara na gị tupu ọpụpụ mbata, gị ngụkọta njem oge ga-abụ na 3 awa.
Ozugbo ị na-abata, ị ga-abụ na obi nke obodo, na Ọtụtụ nhọrọ maka nri, ụlọ ahịa na ọṅụṅụ. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-ahapụ ụlọ ọrụ, ị ga-ahụ ndị dị nso Brasserie Terminus Nord, a famous Art Nouveau style restaurant directly across the road from the train station. Ma ọ bụghị ya, ị chọrọ nanị iji na-awagharị na-ọ bụla direction chọta ụfọdụ ndị kasị mma oriri na ọṅụṅụ na Europe.
As a holder of the Eurostar direct train ticket, ị ike nweta 2 maka 1 ohere ọtụtụ n'ime ndị ngosi ihe mgbe ochie na veranda, nke nwere ike ịzọpụta gị ọtụtụ narị dollar.
The Eurostar agba mgbe, na ruo 19 ọpụpụ kwa ụbọchị dabere na ezumike na ngwụsị izu. The mbụ ụgbọ okporo ígwè nke ụbọchị napu apu na 05:40 ma na-a ngụkọta nke 2 awa na 37 nkeji. Nke a bụ mgbe otu n'ime ndị dị ọnụ ala tiketi dị, ma ọ bụrụ na ị na-egbughị oge n'ịza nēbili n'isi i nwere ike zọpụta ụfọdụ ego na gaba na ezumike nke chi ọbụbọ. Uru ọzọ a n'oge opupu bụ na mbata gị oge na Paris bụ 09:17, nke pụtara na ị nwere a ụbọchị zuru n'ihu gị maka ihe ọ bụla na-eme ị ga-amasị họrọ.
Disneyland Paris – Ụgbọ oloko na-agba ọsọ ọtụtụ ugboro n'izu ofụri isua na kwa ụbọchị n'oge ezumike ụlọ akwụkwọ. The ụgbọ okporo ígwè nri n'èzí Disneyland n'ọnụ ụzọ. The njem na-ewe n'okpuru 3 awa ngụkọta.
Lyon, Avignon, na Marseilles- Kemgbe afọ a ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ site na 1 ka 5 ụbọchị kwa izu, ezie na ọ na-amị emetụta otú ijide n'aka na ọ na-agba ọsọ mgbe ị kwesịrị. Ọ na-akwụsị na Lyon Part-Dieu ojii (4.75 awa), Avignon TGV ojii (6 awa) na Marseilles St Charles ojii (6.5 awa).
Chọọ anyị na saịtị na akwụkwọ tiketi niile nke Europe ji mma ebe, na nsonye Belgium, Italy, Switzerland na UK (gụnyere London na Paris ụgbọ okporo ígwè na Eurostar). Anyị search engine na-iji zọpụta ego na niile tiketi na-agụnye mba ntinye akwụkwọ ụgwọ. Anyị na-eme ka ọ dị mfe maka gị ịzụta site n'ịnakwere multiple ụzọ akwụ, tinyere kaadị, Giropay, Ezigbo na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-paris-train%2F%0A - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)